Feysal Cali Waraabe oo kalsoonidii lagala noqday iyo dacwad lagu soo oogayo (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Feysal Cali Waraabe oo kalsoonidii lagala noqday iyo dacwad lagu soo oogayo (AKHRISO)
Guddiga joogtada ee golaha wakiilada Somaliland ayaa kalsoonidii kala noqday guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Somaliland ee UCID Injineer Feysal Cali Waraabe, iyagoona sidoo kale eedeeyn kulul u jeediyay.
Qoraal uu soo saaray guddiga joogtada ee golaha wakiilada Somaliland ayaa lagu shaaciyay in xildhibaanada golaha wakiilada ay kalsoonidii iyo wadashaqeyntii kala noqdeen Injineer Feysal Cali Waraabe.
Injineer Feysal Cali Waraabe ayaa lagu eedeeyay inuu jabiyay dastuurka u yaalla Somaliland, islamarkaana uu halis ku yahay nabadda iyo midnimada dadka Somaliland.
Sidoo kale, Feysal Cali Waraabe ayaa lagu eedeeyay inuu yahay mas’uul aan ixtiramin, islamarkaana aan ku dhaqmin dastuurka Somaliland, taasi oo keentay markii dambe in lagala noqdo kalsoonidii iyo wadashaqeyntii kala dhaxeeysay guddiga wakiilada Somaliland.
Ugu dambeyntii, guddida joogtada ee golaha wakiilada Somaliland ayaa ugu baaqay xeer illaaliyaha guud ee Somaliland inuu kusoo oogo dambiyo uu ku eedaysan yahay Injineer Feysal Cali Waraabe, oo ay ka mid yihiin inuu abuuray kicin dadweyne iyo iska horkeenka bulshada Somaliland.
Akhriso qoraalka guddiga joogtada ee golaha wakiilada Somaliland